Mpanamboatra fitaovana famenon-tsakafo - Wisepowder About
Wisepowder dia mifantoka amin'ny fikarohana, famoronana ary fanavaozana ny akora manta ho an'ny nootropics, ny famenon-tsakafo sy ny menaka fanafody. Izahay dia mpanamboatra matihanina sy za-draharaha sady mpamatsy.
Wisepowder dia orinasa fanta-daza sy malaza ary manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny indostrian'ny sakaosy sinoa. Ary amin'izao fotoana izao, ny famokarana akora rehetra dia manana rafi-pitantanana fanaraha-maso manara-penitra kalitao izay mifanaraka amin'ny fitsipika GMP. WISEPOWDER dia manome vokatra tsara indrindra. Ary, ekipa iray niara-niasa tamin'ny tompon-toerana tany Etazonia izahay dia hanome serivisy ifandraisany amin'ireo mpanjifantsika eran'izao tontolo izao.
Wisepowder dia nanangana foibe laboratoara misy fitaovana avo lenta avy any Alemaina, Japon ary Etazonia mba hamakafaka sy hanaingoana ny atin'ny akora mavitrika izay manome antoka ny Wisepowder mifehy ny dingana rehetra amin'ny fizotran'ny famokarana.
Sehatra R & D
Enzyme nitarika sehatra evolisiona
Sehatra Fanoratana mikraoba
Ny metabolic Engineeringplatform
Sehatra testof Fermentation kely
Fitsapana kely amin'ny sehatra catalytic Enzyme
Ny fitsapana kely an'ny Platform Extraction Product
Fitsapana fitiliana eo amin'ny sehatra Fermentation
Fitsapana piloton'ny akora kataly Enzyme
Fitsapana pilotan'ny Platter Extraction Product
misy biolojika matihanina 26 efa za-draharaha
nanatevin-daharana sy nanorina fiaraha-miasa maharitra amin'ireo laboratoara 89 manerantany
Taona maro niainana
dia naorina tamin'ny taona 1999. Taorian'ny fandrosoana maharitra 20 taona
miaraka amin'ireo mpiasa ekipa nahita fianarana 112.
- Gallery Gallery
AZA MISY TSY MISY INDRINDRA
Subscribe to our newsletter ary misambotra Makà teny nalaina!